AKAIGOCHERA PAHUTSI - CHISHONA
“Mudzimai wenyu ari muroom 59 paMakotore Hotel iri munaSamora Machel padyo naFourth Street.Endai munozvionera mega.Ndangoti ndikunyeurireiwo.”
Detective Superintended Gibson Marangwanda vakanzwa dikita richierera nomuviri wavo wese pavakapedza kuverenga mashoko aya panharembozha yavo.Nharembozha yaGibson yaive yemhando yepamusoro-soro zvokuti aiti kana akaibata waifunga kuti zvimwe akatakura bhaibheri.Nhare iyi yaikwanisa kuita zvishamiso chaizvo zvanosanganisa kuratidza nzvimbo inenge iri munhu wauri kutaura naye.
Murume mukuru akadededera nehasha paakatinya nhamba dzomudzimai wake ndokuoona kuti chaive chokwadi kuti mudzimai wake akange ari panzvimbo yainge yataurwa. Chimwe chakanetsa mutikitivha uyu ndechokuti akatadza kuziva kuti nhare yakange yatuma mashoko aya yaive yaani. Akaedza kufonera nhamba iyi asi yaingorira isingadairwi. Zvairatidzawo kuti munhu uyu akange ari makare muna Samora Machel Avenue.Zvisinei akangozvidzora nerokuti akuruma nzeve ndewako.
Ave kuda kuti abude muhofisi make mumwe mupurisa wechidiki akabva apinda. Gibson aive mukuru wamatikitivha epaNyangwe Central Police Station, akarerekera kunyaya dzokupondwa kwavanhu.
“Shefu ndinokumbirawo docket romukadzi uya akabaya murume nebanga,” akadaro sajeni Fainos Chikoto.
“Madockets emhirizhonga mudzimba awandisa muhofisi muno, chii chirikuitika munyika muno?Wozodzoka masikati Chikoto, iyezvino pane pandiri kumhanyira,” akapindura Gibson.
Akatora pfuti yake achibva aikoka mabhara matanhatu.Akasimudza runhare rwake ndokuchaya nhamba dzomudzimai wake.Nhare yakatora nguva ichirira isina kudairwa.Payakazodairwa shasha yakange yave kuda kuputika nehasha.
“Iwe Deliwe uripai pausiri kudaira phone!”
“Chiiko nhai dady?Ndiri mubank kanhi nhai,” mukadzi akadaira hana yake ichidididza kunge chigayo.
“Saka kumba urikusvikako nguvai?” akabvunza Gibson.
“Manje-manje kana ndangopedza kutenga zvandiri kuda,” akapindura Deliwe achipa chikomba chake Jairos Bvocheko zviratidzo zvokuti asamboedza kana kukosora zvako.Vaviri vakange vari kusasana vari pakati paro guta reHarare.Chavasina kuziva ndechokuti gava rakange radambura musungo.
Uyuwo Gibson haana kuda kupa zviratidzo zvokuti pane zvaakange arikuziva maererano namafambiro omudzimai wake.
“Arikudeiko murume wako, mapurisa anochengera zvisina maturo, ndosaka vachizotorerwa vakadzi nesu vana Jay Jay” akadaro Jairos akatsamhira kumadziro.
Vakuru vanoti chinotanga mberi mashura.
“Ufunge zvandaitwa nerime benzi pandaburuka paCharge Office handina kuzvinzwisisa hanzi imi sisi svondo rino hariperi musina kutsikwa nemotokari, ufunge?Kwozotiwo hope dzacho dzandarota,” akadaro Deliwe achiratidza kushushikana kukuru.
“Ibenzi kanhi!babie. Chii chaizvo chawarota?” murume akabvuza.
“Shamwari ndarota tichidzingirirwa neshumba. Ini ndatozopona nokukwira mumuti asi iwe zvinenge zvazokurambira, ufunge. Sorry hako handisi kukushuridzira asi ndizvo zvandarota,” akapindura Deliwe.
“Iwe muno muHarare isu vana Jairos ndisu shumba dzacho.Ndisu tinototyisa, hapana chinondiwana ini,” mukomana akapindura.
Gibson akapinda mumotokari yake achibva aisimudza nehasha akananga kuna Samora Machel. Vazhinji vaaishanda navo paNyangwe Central Police Station vakaziva kuti hameno akange avhiringa murume uyu. Pfungwa dzake dzaishushikana nokutadza kuziva kuti mukadzi wake akange apindwa nei. Zvose zvaaida aimuitira, imba akamutengera, zvipfeko nechikafu yaive sharaude.Dambudziko raingovepo chete nderokushaya mbereko.
Mumakore makumi matatu aakange asevenza somutikitivha Gibson haana kumboshatirwa zvakadai. Deliwe akange ave mudzimai wake wepiri mushure mokushaika kwakaita mudzimai wokutanga.
Paaifunga zvese izvi hasha dzake dzakange dzichiwedzerawo.Mufaro wamakore mashanu kubva paakaroora Deliwe wakashanduka kuve ruvengo munguva shomanana.
Akasvikomisa motokari yake pamberi pehotera ndokutora nharembozha yake.
Deliwe akarohwa nehana paakaona nhamba dzomurume wake zvekare. Gibson akange ari murume asina ruchengera. Aiwanzofonera mudzimai wake kana paine zvakakosha zvaanoda kutaura.
“Iwe Jairos aya ave mahwani.Murume wangu haawanzofona-fona.Something is wrong. Hallo dady” mukadzi akadaira phone yake.
“Wave kupi manje?” akabvunza Gibson.
“Ndave paflyover yomunaSeke Road ndave kutodzokera kumba,” akapindura Deliwe.
“Right buruka mukombi imomo undimirire paArcadia, ndiri kusvika ipapo manje-manje” akapindura Detective Marangwanda, achibva adzima phone yake.
“Shamwari Jairos aya ndiwo mahwani, wotondipawo mari yetaxi, ndimhanye kunaSeke Road, baba ava hameno zvavandifungira,”Deliwe akadaro achigadziridza bvudzi rake.
Uyuwo Jairos haana kunyanya kukahadzika nezvakange zviri kuitika. Akavhura hwindo romumba mavaive ndokubatidza mudzanga wefodya asi haana kuzokwanisa kuputa fodya iyi achibva akurumidza kuvhara hwindo. Akabata musoro wake achiratidza kuvhunduka kukuru. Zvaakange aona panze hazvina mukare akaona.
“Deliwe shamwari pano pashata!Murume wako akamisa motokari yake panze apo toita sei?” akadaro Jairos achigwagwadza nokutya.Ungwaru hwese huya pakange pasisina, vaviri vakange vatopinda munataisireva.
Jairos akada kumbopindwa nepfungwa yokuti asvetuke mudhuri waive pahotera, asi akaziva kuti hapana kwaaisvika uye aitozobatwa navanhu achinzi imbavha. Zvekare, ainyatsozviziva kuti mapurisa omuZimbabwe haatizwi.Hotera iyi yakange yavakwa kare chaizvo, nokudaro yakange iine musuwo mumwechete waiva munaSamaora Machel Avenue panova ndipo pakange pakamira Gibson.Dai paive nemisuwo miviri pamwe vaikwanisa kutiza vobuda nomuwe wacho.Hotera iyoyi yaivewo nomukurumbira chaizvo muguta reHarare maererano nemabasa erima.
Jairos akagara pamubhedha akabata rushaya ndokutanga kufunga zvakaitika pazuva raatanga kusangana naDeliwe.
Vaviri vakasangana pachitoro chavaDodzo chiri mumusha weSunningdale.Deliwe akange arikutenga chingwa namazai uyuwo Jairos akange arikutsvaga hwahwa hwokuti abvise bhabharasi rakange ririkumutambisa chamutengure.Deliwe aikwikwidza panyaya dzorunako mumusha wose weSunningdale.Varume vashoma vaisacheuka kana vachinge vasangana naye.Aigarwa nezvipfeko zvokuti waifunga kuti akazvarwa nazvo.
“Hanzvadzi regai ndikubhadharirei ndine mari yakakurisa,” akadaro Jairos achitambidza musikana womuchitoro $50 yakabatana.
“Ndozodii nemari yenyu nhai mukuwasha?”Deliwe akabvunza.
“Its ok, ndiyo Christmas box yenyu hanzvadzi,” akadaro Jairos achitambidzwa chenji yake.
Vaviri vakadungamidzana vachibuda muchitoro.Mukomana haana kumirira mumwe mukana achibva angoiparura nyaya yake.
“Sister ndinokumbirawo nhamba dzenyu, ndinoda kuzokukokai kumabiko kumba kwedu paNew Year,” mukomana akapindura.
“Hi-i mukuwasha munondiurayisa nemurume wangu.Ko iye mudzimai wenyu anenge achiti ndini ani?” akabvunza Deliwe achinyemwerera.Mwanasikana aiti kana akanyemwerera pamatama pake paibuda tumakomba-makomba twaiyevedza.
“Sister ini hangu handina mudzimai. I am still single and searching,” akadaro Jairos.
“Manje ini murume wangu mupurisa, munoswera maiswa nyere mugotsi mukaonekwa muchifamba neni.Ibvai matodzokera zvenyu, makuhwa emuno muSunningdale munoaziva.Please ibvai madzokera mukuwasha,” Deliwe akadaro.
“Horaiti chindipaiwo nhamba dzenyu ndozokufonerai seshamwari zvayo isinei nezvakawanda,” akapindura Jairos.
“Asi kana ndakupai please musazondifonera pese-pese,” akadaro Deliwe. Vaviri vakapana nhamba dzenharembozha vachibva vaparadzana.Zvakazoitika mushure hapana anoziva kunze kwaiye Nyadenga musiki.
Ichokwadi kuti mufaro mwena unoguma. Munguva shomana-na yapfuura Deliwe naJairos vakange vari kuneimwewo nyika, asi munguva dikidiki vakange vatarisana norufu.
Pamusuwo wemba yavakange vari pakabva pagogodzwa.
“Iwe mudhara nguva yenyu yakwana, itai mubude imomo please, otherwise mave kuzobhadhara imwe mari pamusoro” akadaro mukomana aishanda pahotera.
Kuti varambe varimo zvakange zvisingaite nokuti Jairos akange asisina mari, kuti vabude zvaisakwanisika nokuti kunze kwakange kwaberekera mbada. Vaviri zvakavatorera nguva yakareba kuti vazive kuti voita zvipi.
“Mira ndimufonere ndimuti tisangane kuhofisi kwake,” Deliwe akataura miromo ichibvunda nokutya.
“Pamwe hameno musikana wake waakatomirirawo zvake pano. Tinobuda takasiyana, ini ndotanga iwe wozotevera” Jairos akapindura achiedza kusimbisa Deliwe.
Deliwe paakada kuti achaye nhare, musuwo wemumba mavange vari wakabva wati bherengende kuvhurika.Ino hwende yerume yakabva yapinda.
“Manguva mataurirwa kuti nguva yenyu yakwana kudhara, get out!” rakadaidzira rume rainge Goriati womuBhaibheri.
“Please mukoma imbomirai kanhi titaure, panze hapana kumira zvakanaka apo, ndinobhadhara imwe mari kanhi” Jairos akawombera akapfugama.
Zvese izvi hazvina akaterera. Rume iri rakabata vaviri ava richibva ratanga kukakaritsana navo rakananga kumusuwo wehotera.
“Panze hapana kumira mushe kuita sei? Hee . . . basa rokutora vakadzi vavanhu, get out!”
“Mukuwasha kani regai kudaro, please please tinzwisiseiwo,” Deliwe akadaidzira nenzwi raipisa tsitsi.
Uyuwo Gibson paakanzwa mhere-mhere yaisanganisira inzwi romukadzi wake akabva atora pfuti yake ndokufambisa akananga kumusuwo wehotera. Ave kuda kunosvika pamusuwo akabva aita mahwekwe naDeliwe naJairos varikukwekweredzana nesimukandikupwatse yerume.
Gibson haana chaakataura, chaakwanisa kubudisa ipfuti yake ndokuiridza akananga vaviri ava. Akatendeuka ndokusimudza motokari akananga kukamba yamapurisa.
Munguva shomanana pahotera apa pakange pazara vanhu, vazhinji vacho dzaive pfambi dzinogara mumaAvenues. Munhu nemunhu aivepo aive nerondedzero yake yokuti zvakange zvafamba sei. Iyiwo hofori yokukwekweredza Deliwe naJairos yazokapedza muswere wezuva rose yakazvikiyira muchimbudzi ichirangarira kupotswa kwayakange yaitwa nepfuti.
Gibson akasvika paNyangwe Central Police Station achibva angonanga kuhofisi yomukuru wake kunomutsanagururira zvakange zvaiitika.
Assistant Commissioner Urayai Mushambadope, vaitungamirira mapurisa ose omuguta reHarare vakadzungudza musoro wavo pakapedza Gibson kurondedzera nyaya yake. Vakaziva nechomumwoyo kuti vakange vave kuzorasikirwa nomumwe wamatikitivha aiziva basa. Munguva shomana-na inotevera Gibson ndiye aifanira kuzotora chinzvimbo chavo sezvo nguva yavo yomudyandigere yakanga yakwana
“Nharembozha idzi ini ndinoshaya kuti dzakauya kuzobatsira budiriro yenyika yedu here kana kuti dzakaunzwa kuzoparadza misha yavanhu? Dai dzange dzisipo pamwe Gibson angadai asina kuuraya mudzimai wake nechikomba. Asizve kudanana kwomudzimai wake nechikomba kwaizogumirepi? Vangani varume navakadzi varikuiita mabasa erima kuburikidza nenharembozha?Dzimba ngani dzaparadzwa namafoni iwaya?”VaMushambadope vakazvibvunza nechemumwoyo.Pakarepo matikitivha maviri akabva apinda muhofisi yavaMushambadope ndokutungamidza Gibson kuenda kunomuvharira mutirongo.